यस्तो रह्यो, कालिका भगवती मन्दिरको आजको यात्रानुभूति ! – ebaglung.com
यस्तो रह्यो, कालिका भगवती मन्दिरको आजको यात्रानुभूति !
२०७६ भाद्र १४, शनिबार १८:४६	Footer Slider, Top News, अन्य समाचार, विविध
बागलुङ २०७६ भदौ १४ । बागलुङ कालिका भगवती मन्दिर परिसरबाट मगन्ते जोगीहरुलाई हटाइएको एक महीना पुग्न थाल्यो । देवीको दर्शन गर्न र भिक्षाटन हटाइए पछिको अवस्था नियाल्ने हेतुले आज कालिका भगवती मन्दिरको परिसरमा पुगे। गेट प्रवेश गर्ने बित्तिकै समाजको प्रतिबिम्ब बनेर देखिने साधु सन्त असहाय ,अशक्त, जोगि ,रोगी, अपांगहरुको कुनै ध्वनि सुनिएन। सुनसान र मौन लाग्यो मन्दिर गेट भित्रको दृश्य । बरु नबजोडीहरु सेल्फी लिन मस्त देखिन्थे ।
समाजमा असहायहरु छन् भनेर देखाउने जिउदो सङग्राहालय बन्द भएको अनुभुती भयो । मन्दिर अगाडिका घन्टाहरुको आवाजले तिनै जोगि र मगन्तेहरुको आवाज गुन्जाइरहेको अनुभुती भयो। मन्दिर वरिपरि मन्दिरको भेटीबाट रोटीखानेहरुको बाक्लै उपस्थिति थियो । एक छिन् पाठ लागाएर राम्रै कमाई गर्ने पुरेतहरु पनि बाक्लै थिए ।
मासिक रूपमा भजन गाएर पारिश्रमिक लिने भजन मंडलीको उपस्थिती देखिएन । मन्दिरकै पश्चिम् पट्टि फोटो बनाउने ब्यापारिक पसल देखियो। चिडियाखाना भनेर बनाइएको खोरमा फोहोर फाल्ने थोत्रा बास्केटहरु र फोहोरको थुप्रो देखियो ।फोहोर नजिकै दुई मृगहरु हराइरहेका थिए । जोगि र तिर्थ यात्रीले स्नान गर्ने नौ धारा सुकेका थिए । योगि र मगन्तेहरुको चीत्कार घन्टाको आवाजमा सुन्दै मन्दिरबाट बाहिरिए। कालिका मन्दिरमा देवी स्थानको अुनुभूति भएन । जोगि बिनाको मन्दिर मुर्ति बिनाको मन्दिर आस्था बिनाको मुर्ति जस्तो अनुभूती भयो ।
सनराईज बोर्डिङ स्कूल, बानपा ३ गुठी ।
जैमिनी- १० राङ्खानी सेपुवा डाँडामा रहेको टेलिकमको टावर सन्चालनमा !
प्रगतिशील युवा परिवार काक्राखोरको तीजी कार्यक्रम जारी !